တိုင်းရင်းမေ ဗန်တို (မနီနီ ရေးသားပြုစုပြီး သိုင်းဦးချစ်သန်း တည်းဖြတ်သည်) | Thaing Wizard
တိုင်းရင်းမေ ဗန်တို (မနီနီ ရေးသားပြုစုပြီး သိုင်းဦးချစ်သန်း တည်းဖြတ်သည်)
Posted on March 20, 2013 by Aung Thu Htet	ဆရာမ မနီနီရေးသားပြီး ဆရာကြီး ဦးချစ်သန်း ကိုယ်တိုင် ပြန်လည်တည်းဖြတ် ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းမေ ဗန်တို စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာ ဗန်တိုနည်းပေါင်း-၁၀၀ ကို ရုပ်ပုံ ၁၆၆-ပုံ နဲ့ ဝေေ၀ဆာဆာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
လူတို့သည် ခေါင်းငုံ့နေသူကို အနိုင်ကျင့်တတ်၏။ မခံချင်သူကိုမှ လေးစားစိတ် ရှိကြသည်။ (ပီမိုးနင်း)
တိုင်းရင်မေ ဗန်တို စာအုပ်ပါ နည်စနစ်များသည် တိုင်ရင်းမေဂျာနယ်တွင် ဆရာမ မနီနီ ရေးသားခဲ့သည့် ဗန်တိုနည်းစနစ်များကို စုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ သိုင်းဗန်တိုပညာကို ဆရာများနှင့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဆည်းပူးရန် ခက်ခဲနေသူများအတွက် အဓိကဦးတည် ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကာမူ တတ်ပြီးသူ သိုင်းသမားများအတွက် လှန်လှောစရာ၊ ကိုးကားစရာ အထောက်အကူဖြစ်ပြီး မတတ်သေးသူများအတွက် အားကိုးအားထားပြုနိုင်မည့် စာအုပ်ဖြစ်သည်။ တိုင်းရင်းမေ ဗန်တို စာအုပ်သည် အမျိုးသမီးများအတွက် လူဆိုး၊ လူယုတ်မာ၊ လူမသမာတို့၏ ဘေးမှ အကာအကွယ် အစောင့်အရှောက်ပေးမည့် မိတ်ဆွေကောင်း၊ အဖော်မွန် ဖြစ်သည်။
အမှန်စင်စစ် ဤစာအုပ်သည် တိုင်ရင်းမေ ဗန်တို ဟု အမည်ပေးထားသော်လည်း အမျိုးသမီးများအတွက်ဟု ရည်မှန်းပြီး အမျိုးသမီးများသာ အသုံးပြုနိုင်မည့် နည်းများအနေဖြင့် ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါ။ သူတစ်ပါး၏ လက်ရောက်စော်ကားမှုများကို မခံလိုသူ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကြီးကြီး၊ ငယ်ငယ်၊ ရွယ်ရွယ်၊ လတ်လတ်၊ ကလေး သူငယ် ပါမကျန် ပြုလုပ်နိုင်သောနည်းများကို ဗန်တိုပညာမှ စိစစ်ဖော်ပြပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အားနွဲ့သော အမျိုးသမီးများပင် ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်သော နည်းများဖြစ်၍ အားကြီးသန်စွမ်းသော အမျိုးသားများ အသုံးပြုပါက ပိုမိုထိရောက် အသုံးဝင်မည်ကို လက်တွေ့ပြုလုပ်ကြည့်မှ ပိုမိုသဘောပေါက်လာမည် ဖြစ်သည်။
ဗန်တိုပညာသည် စနစ်တကျ တတ်မြောက်သော ဆရာများနှင့် သင်ကြားရပါက အတတ်မြန်သော ပညာဖြစ်သကဲ့သို့ အလေ့အကျင့် မရှိပါက အလွယ်တကူပင် မေ့လွယ်၊ ပျောက်လွယ်သော ပညာလည်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤစာအုပ်ပါ နည်းစနစ်များကို တတ်မြောက်ရုံမျှဖြင့် တင်းတိမ်နေပဲ အမြဲမပြတ် လေ့ကျင့်နေသင့်သည်။
တိုင်းရင်းမေ ဗန်တို စာအုပ်ပါ နည်းများသည် လက်ရောက် စော်ကားမှုများကို ခုခံကာကွယ်သော နည်းများဖြစ်သည်။ တိုင်းရင်းမေ ဗန်တို စာအုပ်ကို ကြေညက်ထားပါက ဗန်တိုပညာကို ဆက်လက် လေ့လာရာတွင် အထောက်အကူ ပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စာကိုဖတ်၊ ပုံကိုကြည့်ရုံမျှဖြင့် မလုံလောက်ဘဲ ဇွဲရှိရှိဖြင့် ကြိုးစားလေ့ကျင့်နိုင်ပါက အရေးကြုံလျှင် အမှန်တစ်ကယ်ပင် သက်လုံကောင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤစာအုပ်တွင် ထီးနှင့် ကာကွယ်နည်းများ၊ လက်နက်မဲ့ ကာကွယ်နည်းများ၊ လက်မနှင့် ထိုးရန်နည်းများ၊ ပါးကို ရန်ပြုလာသည်ကို ကာကွယ်နည်းများ၊ ခြေထောက်ဖြင့် ခုခံတိုက်ခိုက်နည်းများ၊ တံတောင်သုံးနည်းများ၊ အလွယ်ဆုံး ဗန်တို ခုခံနည်းများ၊ ဆံပင်ဆွဲခြင်းကို ရုန်းထွက်နည်းများ၊ လက်ပင်းညစ်ခြင်းကို ခုခံနည်းများ၊ လက်ဖမ်း လက်ချုပ် ဖြုတ်နည်းများ စသည်ဖြင့် အားကိုးဖွယ်ရာ သိုင်းဗန်တိုနည်းလမ်း အသွယ်သွယ် ပါရှိပါသည်။
၀န်ခံရန်ရှိသည်မှာ တိုင်းရင်းမေ ဗန်တို စာအုပ်သည် Thaing Wizard မှ scan ဖတ်၍ ပြုလုပ်ထားသော စာအုပ်မဟုတ်ပါ။ ရှားရှားပါးပါး အင်တာနက်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိဖူးသော တစ်အုပ်တည်းသော မြန်မာလိုသိုင်းပညာရပ်ဆိုင်ရာစာအုပ် ဖြစ်သည်။ Myanmar Family Forum (မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်) မှ download ရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်တွင် အချို့သောနေရာများ၌ စာရွက်အလွတ်များကို တွေ့ရမည်။ သို့သော် စာမျက်နှာ ကျော်သွားခြင်းမဟုတ်။ အားလုံးအပြည့် အစုံပါပါသည်။ အချို့သောနေရာများ၌ စာမျက်နှာလွဲနေသကဲ့သို့ တွေ့ရမည်။ သို့သော် စာမျက်နှာ လွဲခြင်းမဟုတ်။ စာအုပ်ဟောင်းနေသောကြောင့် မထင်ရှားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်သည် File size အတန်ငယ် ကြီးသည်မှအပ quality လည်း ကောင်းပါသည်။
တိုင်းရင်းမေ ဗန်တို စာအုပ်ကို ဒီနေရာ မှာ ကူးယူလို့ရပါပြီဗျာ…
This entry was posted in Bando, Martial Arts, Martial Arts Book and tagged စာအုပ်, ဗန်တို, မနီနီ, ဦးချစ်သန်း by Aung Thu Htet. Bookmark the permalink.	2 thoughts on “တိုင်းရင်းမေ ဗန်တို (မနီနီ ရေးသားပြုစုပြီး သိုင်းဦးချစ်သန်း တည်းဖြတ်သည်)”	naythwaymg on May 22, 2013 at 3:23 pm said:
Reply ↓	ayeminkywe on June 1, 2013 at 12:53 pm said: